UBAXYADA BJøRK, MIRO, DHIR: SHARAXAAD IYO SAWIR - BEERTA
The yar iyo waxyeelada waxyeello of saplings: bjørk, miro iyo geedkii
In qaab dhismeedka jir ah ee geed kasta waxaa jira lakabka nafsiga ah physiologically firfircoon - sapwood.
Waxay buuxisaa booska inta u dhexeysa asalka qoryaha iyo jilifka, waa kormeerid nafaqo iyo biyo laga bilaabo xididada si taajka iyo dhabarka.
In bacriminta this iyo degeen duqsiyo yar yar oo ka soo qoyska jilbaha jilif - sapwood.
Noocyada Sapwood iyo gobollada qaybinta
200 nooc oo ka mid ah kuwa lamid ah ee weevil galaan kooxda bayoolaji ee cayayaanka ee dalagyada miraha ee waqooyiga yar yar iyo koonfurta America, iyo 50 ka mid ah ayaa ka wakiil ah nooca loo yaqaan 'classifier' ee waddankeena.
Cayayaankaan "ku takhasusay" labadaba kuwa beeraha laga sameeyey (tufaaxa, pear, iwm) iyo dhirta duurjoogta ah sida ash buurta, hawo geedka, geedka, geedaha qallalan iyo geedaha cagaarka ah.
Dhammaan wareegyada horumarinta duqsigu wuxuu ka dhacaa lakabka firfircoon ee geedka, sidaas darteed keenaya dhaawac aan loo baahnayn, qodaya mareyaal badan, iyaga oo ku xir xiraha faaruqinta, burburinta unugyada cambiyada (bixinta kororka unugyada jirka), taas oo keenta finanka.
Macluumaadka: Mid ka mid ah duqsiyo baradho ah oo lagu rido ilaa noloshiisa ilaa 3 strokes 6 cm dheer. Dumarka hal haween ah waa ilaa 100 ukun. Waxaad qiyaasi kartaa dhaawaca in jiilka keli ah ee cayayaankaasi ay sameeyaan.
Ku dhawaad ​​nooc kasta oo qoryo ah haysato waajibaadkaaga (mono-phage), oo doorbida dhirta gaarka ah si loo hubiyo jiritaanka jiritaanka:
Geedo la shidey;
Noocyada qaarkood ayaa muujinaya doorbid loogu talagalay gobolka qaybinta:
Moravitsa sapwood (Dauria, Waqooyi bari Shiinaha).
Noocyada kala duwanaanta waxaa bixiya qaababka muraayada ee cayayaanku:
Interest: Sapwood ma aha oo kaliya raaxada jecel ee sapwood ah, waxaa sida caadada ah lagu daray cuntada ay Yakuts.
Tafaasiisha Nooca Miraha
Sapod - duqsiyo oligophage madow madow:
iyada oo la adeegsanayo farsamoyin aan fiicnayn iyo isku-dheelitirnaanta;
caloosha oo ah 8 qaybood, toosan, jilicsan;
Madaxa yar, sida ay ahaatay, la geliyay laabta;
antennae leh dhoobo dhaadheer ah oo ah dhinacyada (naadiyada), cufnaanta ku daboolan timaha;
lix lugood oo leh ilig ka baxsan lugta hoose;
oo leh timo badan iyo miisaanyo daboolaya jirka oo dhan.
Noocyada waxaa lagu gartaa cirfiidka galmada.
Ukuntu waa caddaan, qaabab quruxsan oo u eg illaa 1 mm. In dhigi - 50-100 ukunta.
Dhalada ayaa ah caddaan, jilicsan, oo leh jilcil huruud ah, illaa 5 mm; iyada oo la adeegsanayo callus-yada kuwaas oo siinaya dhaqdhaqaaq; shaqsi weyn - midab madow;
Ardaygu waa cadaan yahay midabka midabka metamorphosis ee xayawaanka, oo u dhigma baaxadda; cufnaanta, samaynta gaaban, oo leh geeso xoogan oo muuqaal ah oo dhuuban.
Xaqiiqda: Xaraashka kale, sapwood qoyan, isku dayaya in ay geedo geedo midho leh, inta badan geedaha dhagaxyada. Waxay ka yar tahay xajmiga (illaa 3 mm) iyo madow oo aan madoobeyn. Duulimaadyadiisa oo raadinaya guri cusub ayaa bilaabmaya bil kadib - laga bilaabo Julaay ilaa Agoosto.
Waxaad arki kartaa sida dhoobada loo eego sawirka hoose:
Marxaladaha horumarinta geedka qulka
U muuqaalka muuqaalka duuduubka geedka oo noqonaya gurigiisa ayaa ku dhacaya bilowga Juun - bartamihii July.
Beerka Birchku wuxuu doortaa jir iyo geedo qaro weyn oo geedka daciifay jiilaalka ka dib ama sababtoo ah xad-gudub ku saabsan asalka beeraha ee geedka, qaniinyo ku soo galay iyaga oo abuuraya marinno gaaban, waxay ku quustaan ​​bawdada yaryar. Halka, ka dib jilifaha, ururinta kooxo, wuxuu ku sii jiri doonaa inuu qaato jiilaalka.
Haweenku waxay qabtaa hawl kale: waxay u baahan tahay in ay ku dhegto mashiinka sayniska oo leh dabo dheerad ah iyo godad dhinaca dhinaca ah.
Sameynta shaqadan culus waxay u baahan tahay dadaal, sidaas darteed haweenku waxay ku jirtaa geedi socodka diyaarinta meel gaboobay si xoog leh u quudiya lakabka biyaha ee loo yaqaan 'sapwood'.
Bacriminta waxay ku dhacdaa qaybta fidsan ee istaroogga, ka dibna haweenku waxay dhigtaa ukumaha fossa lateral waxayna ku xiraan iyaga oo leh guf ka samaysan burka.
Marka la fuliyo ujeeddadeeda oo la xiro albaabka weyn ee jidhkiisa, way dhimataa.
In diirimaadka meesha bannaan, ukunta u soo jeestaan ​​dirxiga, kuwaas oo si firfircoon u samaynaya marinka cusub ee jihooyinka kala duwan, cunitaanka sapwood. Jiilaalka ka yar jilif, waxay joojiyaan quudinta ilaa guga.
Marka la gaaro bartamaha bisha May, ka dib marka uu dhamaystiro wareeggeeda, dhalada dhamaadka koorsada waxay dejineysaa "buulo cuncun", halkaas oo habka socodsiinta ardaydu dhacayso.
Laba toddobaad ka dib, duqsiyo cusub ayaa ka soo baxaya ardayga, diyaar u ah inuu raadiyo gurigiisa. Si aad u baxdo, sapling bjørk waxay awoodi kartaa oo kaliya kooraska koorsada.
Waa muhiim: Calaamadda koowaad ee burburinta geedka by miro miro waa muggeed oo burqo buro ka soo jiidashada marinnada gnawed haween ah. On miro dhagax ah - xanjo badan oo soo baxay. Geedka ayaa daciifiya, wuxuu yareynayaa dhalidda, iyo, haddii midho dhoobo, waxay hoos u dhacdaa tayada miraha.
Tallaabooyinka xakamaynta iyo kahortagga
Isticmaalka hababka saamaynta ku sameeya lamaanaha iyo farcankeeda marxaladaha kala duwan ee horumarinta waxay kala duwanyihiin noocyada soo socda ee mucaaradka:
Karantiilka - si looga hortago faafidda shubanka.
Hagaajinta asalka beeraha si loo hagaajiyo caafimaadka geedka iyo baabi'iyo xaaladaha ku qanacsan nidaamka taranta:
doorashada kala duwan;
biyo ku filan;
Caawimaad: Cunto caafimaad leh lafteeda ayaa awood u leh in ay la qabsato qoryaha. Si taas loo sameeyo, wuxuu awood u leeyahay in uu ku shubo casiirka iyo qolalka qulqulka leh dirxiga, taas oo keenaysa in ugu dambeyntii u dhinto.
Biological. Lies in Soo jiidasho xiiso leh - cayayaanka (laga bilaabo qoyska of Hymenoptera) iyo shimbiraha, kuwaas oo ah cadowga dabiiciga ah ee sapwood, ama acarifagov - Fungi iyo bakteeriya, khatar u ah noocyada. Qoryaha iyo qoryaha, qoryaha cagaaran iyo anteraceae (pestryak) waa caawiyayaal fiican ee dagaalka lagaga hortagi karo sapwood.
Kiimikada - ku buufin 2 asbuuc walba leh sunta cayayaanka ("Aktar", "Vektor", "Mospilan", "Confidor") ama fosfoor-organic. Si loola dagaallamo lamida, cirbadaha pyrethroids synthetic ayaa sidoo kale loo isticmaalaa kortex ("Decis", "Sherpa", "Fastak").
Waa in lagu dhajiyo maskaxda in dirxiga iyo ardayga lamid ah caleemaha jilicsan u dulqaadan heer kulka sare iyo iftiinka qorraxda.
Dadku si aad ah ayey u saameeyeen qoyaan kordhay ama kala duwanaanta heerkulka inta lagu jiro duulimaadyada. Abaartu sidoo kale waa ay u liitaa.
Iyada oo ku saleysan aqoontan, waxaad dhisi kartaa nidaam tallaabooyin ah si loo ilaaliyo beerta in ay ku dhufato cayayaankan.